Fitsaboana radiôna Proton ho an'ny homamiadan'ny atiny - Proton Kalifornia
Karakarao amin'ny homamiadana Proton Therapy
Fitsaboana ny homamiadan'ny voan'ny kansera
Ny teknolojia fanaraha-maso beam-panodinana amam-bolo any California Protons dia fomba iray marim-pototra amin'ny fitsaboana amin'ny aretin'ny homamiadana izay ahafahan'ny dokotera manendry atokona ny havokavony amin'ny alàlan'ny taratra avo lenta ao amin'ity faritra ity.
Raha oharina amin'ny fitsaboana fitsaboana pasifika pasifika taloha kokoa, ny teknolojia scan-vakana ny pensilihazo dia manome ny fikarakarana taratra ho an'ny homamiadan'ny atiny ao anaty 2 milimetatra ary amin'ny fikarakarana fatratra. Azontsika atao ny mamely ny fivontosan'ny fivontosana amin'ny alàlan'ny fivontosana ary manamaivana ny fihanaky ny vatan'ny taolana mahasalama. Zava-dehibe ho an'ny marary ny homamiadan'ny aty ity satria ny atiny no ivon'ny filtrana afovoany ho an'ny rà rehetra mivezivezy amin'ny vatana. Matetika, ny marary homamiadana dia manana aretim-pon'ny ambany toy ny cirrhosis sy hepatitis, koa ny fanalefahana ny taratra any amin'ny tavy salama sy ny taova manodidina. Ny fampihenana ny poizina mifandraika amin'ny taratra dia mampitombo ihany koa ny fahafahan'ny marary mameno ny fitsaboana amin'ny fampiatoana na fanemorana kely kokoa.
Miara-miasa amin'ny ekipa multidisiplinaly ao amin'ny UCSD, California Protons dia manolotra radioterapiitam-bohitra (proton beam radioterapi) amin'ny fivontosan'ny vatan'ny atiny, anisan'izany ny carcinoma hepatocellular sy cholangiocarcinoma (kankana izay miorina amin'ny alàlan'ny bile fantsona). Fitsapana klinika voafehy voafetra ihany no nampiseho fa ny aram-by proton dia azo antoka sy mahomby amin'ny mety hisian'ny fihenan'ny poizina ary mampitombo ny fifehezana eo an-toerana raha ampitahaina amin'ny chemoembolization transarterial.
Ny homamiadana voalohany
Ny metastases amin'ny atiny na fivontosan'ny homamiadana izay niainga tany an-toeran-kafa - toa ny tsokao, ny tratranao, ny pancreas, ny hoditra ary ny havokavoka - ary niparitaka teo amin'ny atiny
Arovy ny vavony, ny voa, ny tsinay bitika ary ny aty mahazatra
Soa azo avy amin'ny fitsaboana Proton ho an'ny fitsaboana amin'ny homamiadan'ny Liver
Ny fitsaboana protonolika mandroso dia mamela ny dokotera amin'ny fomba voafantina tsara amin'ny taratra avo lenta amin'ny atin'ny havokavoka voan'ny kansera, ary mampihena ny fatran'ny sela misy taolana mahasalama sy ireo sela mihintsy. Amin'ny toe-javatra sasany, izany dia naseho mba hanomezana fitsaboana haingana kokoa noho ny fitsaboana taratra X-ray na dia amin'ny toe-javatra sarotra aza.
Ny dokotera dia afaka mametraka onjam-pandrefesana ambony amin'ny fivontosanao, ary mampihena ny fatra amin'ny sela miharihary eo amin'ny manodidina anao, izany hoe ny kibonao, ny voa ary ny tsinay kely. Tena zava-dehibe ny fandaniana an'ireny tavy mahasalama ireny satria ny fahasimbana amin'ireo rafitra saro-pady ireo dia mety hisy fiantraikany lehibe sy mety hitarika ho voan'ny kansera faharoa.
Ny teknika manokana dia azo ampiasaina miaraka amin'ny fitsaboana proton mba hikendrena fivontosana mihetsika miaraka amin'ny fametrahana ara-teknika. Zava-dehibe ho an'ny marary ny homamiadan'ny aty ity satria isaky ny mifoka rivotra ianao dia mihetsika ny fonao.
Arakaraka ny ambaratonga homamiadana, ny fitsaboana mitambatra fandidiana fanafoanana, ablation, embolization, chimiothérapie sy ny taratra dia mety ilaina amin'ny fivalanjan'ny atin'ny sasany. Raha ny fitsaboana amin'ny làlam-pandrefesana ihany no fantatra fa ny fitsaboana amin'ny fandidiana na ny famindrana fo, ny fitsaboana proton ho an'ny homamiadan'ny atiny dia afaka manome fifehezana ny fivontosan'ny valopy eo an-toerana raha toa ka safidy fitsaboana azo antoka kokoa noho ny fitsaboana hafa. Ny safidin'ny fitsaboana koa dia voan'ny kansera amin'ny atin'ny, ny taonany, ny fahasalamana amin'ny ankapobeny, ny filan'ny tena manokana ary na ny marary dia voan'ny aretin'ny atiny toy ny cirrhosis sy hepatitis.
Mandritra ny atin'ny kansera amin'ny atiny dia misy fivontosana tokana iray ao amin'ny atiny. Salama tsara ny ambiny ao ary tsy voadidin'ny lalan-dra eo akaiky. Na dia manaisotra ny ampahany marary amin'ny atiny amin'ny alàlan'ny fandidiana famindrana na famindrana ny atiny no fomba fitsaboana mahazatra indrindra, ny fitsaboana ny tara-batana ho an'ny atiny I homamiadana matetika dia mampihena ny mety hisian'ny kansera mitombo na miparitaka.
Amin'ny ambaratonga faharoa amin'ny homamiadan'ny ati-doha dia misy fivontosana lehibe kokoa noho ny 2 santimetatra eo na miakatra ho tonga lalan-dra ny fivontosana. Raha manala ny ampahany marary amin'ny atiny amin'ny alàlan'ny fandidiana famandrihana no fitsaboana mahazatra indrindra, ny fitsaboana ny tara-paha dia mety atoro alohan'ny na aorian'ny fandidiana hampihena ny fivontosana na manampy hampihena ny mety hisehoan'ny homamiadana. Ny marary koa dia mety ho lasa kandidà amin'ny famindrana fo.
Amin'ny homamiadan'ny atiny ambaratonga fahatelo, fivontosana farafaharatsiny farafahakeliny mihoatra ny 2 santimetatra ny fivontosana na nitombo ny fivontosana ho lasa lalan-drà lehibe na firakotra ivelany amin'ny taova hafa. Tsy niparitaka tany amin'ny lymph nodes na toerana lavitra izany. Raha ny fanesorana ny ampahany marary amin'ny atiny amin'ny alàlan'ny fandidiana resection no fitsaboana mahazatra indrindra, ny fitsaboana amin'ny tara-pahazavana dia azo atolotra alohan'ny na aorian'ny fandidiana hampihena ny fivontosana na hanampy hampihena ny risika hiverenan'ny homamiadana. Raha misy marary mahazo fanomezana organ, dia azo atolotra koa ny famindrana aty tanteraka.
Amin'ny ambaratonga faha-IV homamiadana, ny fivontosana dia miparitaka any amin'ny lymph node na taova lavitra. Ho an'ny marary homamiadana eo amin'ny sehatra IV, ny fitsaboana amin'ny fanafody toy ny chimiothérapie no fitsaboana voalohany. Ny fitsaboana taratra ny proton dia mety ampiasaina hampihenana ny fivontosana.
Vokatry ny fitsaboana ny homamiadan'ny proton homamiadana ary ny vokany maharitra
Ny fitsaboana fitsaboana Proton ao amin'ny California Protons cancer Therapy Centre any San Diego dia mety hanolotra valiny mitovy amin'izany amin'ny taratra X-ray mahazatra, raha mampihena ny vokatra maharitra sy mety hiharan'ny fiainana noho ny taratra manimba ny vavony, ny voa ary ny tsinay kely. Mety hihena ihany koa ny kansera faharoa any aoriana any noho ny fihenan'ny tara-pahazavana amin'ny sela sy ny taova mahasalama manodidina anao.
Fikarohana fikarohana manohana ny fitsaboana ny proton ho an'ny homamiadan'ny atiny
Fitsaboana protterototika fitsaboana protonotika ho an'ny metastases amin'ny atiny
Radioterapi sela avo lenta avo lenta: ny hepatocellular carcinoma: vokatra mialoha ny fitsapana II.